ကော်ဖီယဉ်ကျေးမှုကို ပြုစု ပျိုးထောင်ခြင်း
ကော်ဖီအဖျော်သမား အုပ်စုတစ်ခုကို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးနေသော ကိုယ်ကျိုးမကြည့်သည့် စီးပွားရေးသမား တစ်ဦးနှင့် အရည်အသွေးမြင့် အာရေဗီကာကော်ဖီ စိုက်ပျိုးနည်းကို လယ်သမားများကို သင်ပြပေးနေသော အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရည်အသွေးမြင့် ကော်ဖီ သောက်သုံးသည့် ယဉ်ကျေးမှုကို ပျိုးထောင်ပေးနေသည် ပီတာ ဂျင်ဆင် ရေးသားသည်။ ဓာတ်ပုံများ- အန်းဝမ် “ကျွန်တော်က ကော်ဖီအဖျော်သမားတစ်ယောက်.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်တဲ့ FinTech
ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံ- ရန်ကုန်မြို့ရှိ လမ်းဘေးဈေးသည်တစ်ဦး မိုဘိုင်းဖုန်းကို ကြည့်ရှုနေစဉ်။ ဓါတ်ပုံ- အေအက်ဖ်ပီ/ရဲအောင်သူ
တယ်လီနောက အများစု ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ DTAC ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နေပါတယ်။ ပီတာ ဂျင်ဆင် ရေးသားသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အိမ်အကူအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေထိုင်နေတဲ့ အသက် ၂၁ နှစ် Teng ဟာ တစ်လတစ်ခါလောက် ဖခင်နဲ့.
အမေရိကန်နိုင်ငံသားနဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံသားတို့ အတူတကွ ရေးသားခဲ့တဲ့ “မြန်မာ့အချက်အပြုတ်လမ်းညွှန်”စာအုပ်က ယမန်နှစ်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာ့အစားကြီးသူများဆုတွေအတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အာရှအချက်အပြုတ်စာအုပ်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။